आलमआतंक : जेल पठाउने आदेश दिनासाथ न्यायाधीश र सरकारी वकिलले जिल्ला छाडे — Ratopost.com News from Nepal
आलमआतंक : जेल पठाउने आदेश दिनासाथ न्यायाधीश र सरकारी वकिलले जिल्ला छाडे
रौतहट। आफैले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका युवाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हाल्ने मोहम्मद अफ्ताब आलमको आतंक कुन हदसम्म छ ? १२ वर्षपछि उनलाई जेल पठाउने न्यायाधीशको मनस्थितिले पनि यो बयान गर्छ । पुर्पक्षका लागि आलमलाई जेल पठाउने न्यायाधीश दीपक ढकालले रौतहटबाट आफूलाई तत्काल सरुवा गर्न न्यायपरिषद्लाई आग्रह गरेका छन् । आदेश दिएलगत्तै शुक्रबार साँझ नै उनले जिल्ला छाडेका छन् । आलमविरुद्ध बहस गर्ने जिल्ला न्यायाधिवक्ता (सरकारी वकिल) फणीन्द्रराज कटवाल पनि सरुवाको माग गर्दै शुक्रबार नै रौतहटबाट हिँडेका छन् ।
बम विस्फोटमा सामान्य घाइते मात्रै भएको मेरो छोरा पिन्टुलाई सुई लगाएर बेहोस बनाई आलमले जिउँदै इँटाभट्टामा खरानी पारिदियो । छोराको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्दै १२ वर्षसम्म म न्यायका लागि कहाँ मात्र पुगिनँ ? तर, सधैँ न्यायको पनि गला निमोठियो । आलमले राजनीतिक शक्तिका आडमा आफूलाई चोख्याउन खोज्यो । मेरोसमेत ज्यान लिने धम्की आए । भर्भराउँदो छोरोलाई त सिध्याए, अब म बुढो मरे मर्छु भनेर लडाइँमा डटिरहेँ । आज अदालतको आदेशले मलाई न्याय मिलेको अनुभूत भएको छ । अब बनारसमा गएर छोराको काजकिरिया गर्छु ।नयाँ पत्रिका
झापामा मंगलबार १६५ संक्रमित थपिए, ७८ जना निको भए